Abenzi bokupholisa umoya ophathekayo kunye nababoneleli - China uMatshini oPholileyo woMoya oPhezulu
Kupholile umoya weSola DC
Igumbi elincinci eliphathekayo eliphefumlayo lomoya opholileyo ngomkhenkce ...
I-XK-13 / 15SY amanzi apholileyo angaphandle apholisa umoya opholileyo uyathandwa kakhulu kwimodeli yokuthengisa epholileyo yomoya, inokunciphisa ubushushu ngamanzi ngomphunga ngokusetyenziswa kancinci. Inemisebenzi ethile engezantsi: Inkangeleko entle IPP entsha yePlastiki yomzimba, Anti-UV, Anti-ukuguga, ubomi obude ...
Ukuphola komoya opholileyo ophuma kwimizi-mveliso i-XK-18SYA
I-XIKOO yenzelwe isiseko se-XK-18SYA kumatshini opholileyo womoya. Ukuphucula umoya opholileyo wemizi-mveliso nge-350L enkulu yetanki lamanzi, iivili, umbhobho womoya wengqiniba kunye nomoya osasaza umoya ukuze ube yi-XK-18SYA. Ke inokuma kwaye iphathwe kumgangatho, akukho fakelo. LCD + elawulwa kude, kukho isantya ezili-12 ezahlukeneyo zokutshintsha, ngaphezulu kwe-l ...
Igumbi elincinci eliphathekayo eliphefumlayo lomoya opholileyo kunye ne-Ice Pack XK-05SY
I-XK-05SY encinci ephathekayo igumbi eliphefumlayo lomoya opholileyo kunye nePakethe ye-ice XIKOO XK-05SY encinci kwigumbi eliphathekayo umoya opholileyo opholileyo uyathandwa kakhulu, ukunciphisa iqondo lobushushu ngomphunga wamanzi. kwaye incinci kwaye intle, kukho izinto ezingezantsi: Inkangeleko entle Umzimba we-ABS weplastikhi, An ...
umoya opholileyo wasekhaya opholileyo China wenza iXK-06SY
I-XK-06SY umoya opholileyo wasekhaya opholileyo China ukwenziwa kwe-XK-06SY ikhaya elipholileyo elipholileyo lithandwa kakhulu ekhaya, eofisini, kwigumbi. ivenkile nezinye iindawo. Abasasazi bezixhobo ezininzi bathatha le modeli kwishishini labo, kwaye zininzi iindumiso zeXK-06SY ezivela kubasebenzisi bokugqibela. XK-06SY ...
I-18000m3 / h 23000m3 / h yokuhamba komoya omkhulu ophathekayo wamanzi omoya opholileyo XK-18 / 23SY
I-XK-18 / 23SY 18000m3 / h 23000m3 / h enkulu ephathekayo yomoya opholileyo wamanzi i-XIKOO amanzi apholileyo omoya opholileyo anciphisa ubushushu ngamanzi aphuma emanzini. Kunye nokusetyenziswa okuphantsi. Yimveliso enobume bendalo. • Yiza nomoya ococekileyo we-XIKOO opholileyo unobungqina obunothuli bokucoca umoya, xa imeko ...
intlango evaporative umgxobhozo Umthengisi opholileyo we fan XK-75 / 90SY
I-XK-75 / 90SY yomoya oshushu womoya opholileyo uyimodeli yodidi olukhulu lwetanki lomoya opholileyo. Inemigaqo kunye neendlela ezimbini zokongeza amanzi ngetanki elikhulu le-120L. Amalungu ayo asemgangathweni njengasezantsi: I-pp iphathekayo yomzimba we-XK-75 / 90SY inomzimba wePlastiki wePlastiki, i-Anti-UV, i-Anti-ukuguga, ixesha elide lobomi. goo ...
Idilesi: 101, HAYI. I-3, IKANGLE ERJIE, iXIANCHONG, ISITRATO SEQIAONAN, ISITHILI SEPANYU, ISIXEKO SASEGANGANG, CHINA.